Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1739 ny kalandrie Gregôriana.
1739 Amin'ny kalandrie hafa
kalandrie Gregoriana 1739
kalandrie Armenianina 1188
Kalandrie sinoa 4435–4436
Calendario ebreo 5499–5500
Kalandrie persana 1117–1118
kalandrie arabo 1152–1153
kalandrie Ronika 1989
Ny (173762) 2001 RC121 dia anisan'ny zavatra madinidinika ao amin'ny habakabaka. Eo amin'ny fehiben'ny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroan'ny
asiterôida dia mihodikodina manodidon'ny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan'izy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny
Ny fahasamihafan'ny soridala-manodidina amin'ny boribory lavorary dia 0.0990481 ; ny afeliany, na ny toeran'ny soridalany akaiky indrindra amin'ny Masoandro, dia 465.106km (3.1104116 AU), ary ny perifeliany, izany hoe ny toeran'ny soridalany lavitra indrindra amin'ny Masoandro, dia 381.106km (2.5497804 AU). Ny halavam-potoana hidodikodonany manodidin'ny masoandro dia 1739.0024039 andro (4.76112910034 taona). Ny anômalia elanelany dia 70.17888.. Ny fironany indray dia 3.35801 degre.
Ny (55288) 2001 SZ30 dia anisan'ny zavatra madinidinika ao amin'ny habakabaka. Eo amin'ny fehiben'ny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroan'ny
Ny fahasamihafan'ny soridala-manodidina amin'ny boribory lavorary dia 0.0184389 ; ny afeliany, na ny toeran'ny soridalany akaiky indrindra amin'ny Masoandro, dia 431.106km (2.8825284 AU), ary ny perifeliany, izany hoe ny toeran'ny soridalany lavitra indrindra amin'ny Masoandro, dia 415.106km (2.7781516 AU). Ny halavam-potoana hidodikodonany manodidin'ny masoandro dia 1739.2273106 andro (4.76174486133 taona). Ny anômalia elanelany dia 319.86354.. Ny fironany indray dia 2.83182 degre.
Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1736 ny kalandrie Gregôriana.
Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1740 ny kalandrie Gregôriana.
Antonio Parra dia mpahaisiansan-javaboahary teraka ny 25 Jiona 1739
Archibald Campbell dia injeniera mizaka ny zom-pirenen'i Etazonia teraka ny 21 Aogositra 1739 ary maty ny 31 Martsa 1791
49.1739°N 2.7303°E﻿ / 49.1739; 2.7303
I Baron dia kaominina ao amin'ny fivondronan'i Senlis, ao amin'ny departemantan'i Oise, ao amin'ny faritr'i Hauts-de-France, ao Frantsa.
Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 60047.
I Philippe Moquet no ben'ny tanàna mandritry ny taona 2008–2014. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i Pays de Valois
47.1739°N 4.2903°E﻿ / 47.1739; 4.2903
I Brazey-en-Morvan dia kaominina ao amin'ny fivondronan'i Beaune, ao amin'ny departemantan'i Côte-d'Or, ao amin'ny faritr'i Bourgogne-Franche-Comté, ao Frantsa.
Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 21102.
I René Margerie no ben'ny tanàna mandritry ny taona 2010–2014. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i
44.4847°N 0.1739°W﻿ / 44.4847; -0.1739
I Brouqueyran dia kaominina ao amin'ny fivondronan'i Langon, ao amin'ny departemantan'i Gironde, ao amin'ny faritr'i Nouvelle-Aquitaine, ao Frantsa.
Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 33074.
I Jean-Louis Saumon no ben'ny tanàna mandritry ny taona 2008–2014. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i Pays d'Auros
Carlo Vanvitelli dia injeniera mizaka ny zom-pirenen'i Italia teraka ny 1 Janoary 1739 ary maty ny 1 Janoary 1821
Christopher Colles dia injeniera teraka ny 1 Janoary 1739 ary maty ny 1 Janoary 1816
François-Nicolas Martinet dia injeniera, mpahaisiansan-javaboahary mizaka ny zom-pirenen'i Frantsa teraka ny 1 Janoary 1739 ary maty ny 1 Janoary 1800
Giovan Battista Nauclerio dia injeniera mizaka ny zom-pirenen'i Italia teraka ny 1 Janoary 1666 ary maty ny 1 Janoary 1739
John Robison dia mpanao matematika, mpahay fizika, mpamorona mizaka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra teraka ny 4 Febroary 1739 ary maty ny 30 Janoary 1805
46.1739°N 0.5181°E﻿ / 46.1739; 0.5181
I Mauprévoir dia kaominina ao amin'ny fivondronan'i Montmorillon, ao amin'ny departemantan'i Vienne, ao amin'ny faritr'i Nouvelle-Aquitaine, ao Frantsa.
Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 86152.
I Jean-Michel Clément no ben'ny tanàna mandritry ny taona 2008–2014. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i Montmorillonnais
46.0533°N 6.1739°E﻿ / 46.0533; 6.1739
I Menthonnex-en-Bornes dia kaominina ao amin'ny fivondronan'i Arrondissement of Saint-Julien-en-Genevois, ao amin'ny departemantan'i Haute-Savoie, ao amin'ny faritr'i Auvergne-Rhône-Alpes, ao Frantsa.
Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 74177.
I Guy Demolis no ben'ny tanàna mandritry ny taona 2008–2014. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i Communauté de communes de Cruseilles
Philipp Matthäus Hahn dia injeniera mizaka ny zom-pirenen'i Alemaina teraka ny 25 Novambra 1739 ary maty ny 2 Mey 1790
45.1739°N 5.3325°E﻿ / 45.1739; 5.3325
I Saint-Vérand, Isère dia kaominina ao amin'ny fivondronan'i Grenoble, ao amin'ny departemantan'i Isère, ao amin'ny faritr'i Auvergne-Rhône-Alpes, ao Frantsa.
Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 38463.
I Marie-Thérèse Dubreuil no ben'ny tanàna mandritry ny taona 2001–2008. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i Pays de Saint-Marcellin
48.3025°N 6.1739°E﻿ / 48.3025; 6.1739
I Villers, Vosges dia kaominina ao amin'ny fivondronan'i Neufchâteau, ao amin'ny departemantan'i Vosges, ao amin'ny faritr'i Grand Est, ao Frantsa.
Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 88507.
I Jean-Luc Cousot no ben'ny tanàna mandritry ny taona 2008–2014. Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i Pays de Mirecourt